Nkowa di nkenke nke “Hopscotch” nke Julio Cortázar | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nkowa di omimi nke «Hopscotch» nke Julio Cortázar
Onye ntà nke gụrụ akụkọ a doro anya na ị na-eche echiche "Hopscotch", ọrụ bụ isi nke Julio CortazarDika akwukwo "tostón" nke ndi nkuzi akwukwo na-eziga n'otu oge na ulo akwukwo. Ndị nke anyị gabigara na nke ahụ, agụla anyị agụụ "Hopscotch" n'oge anyị dị obere ma mgbe ahụ anyị agụwo ya ọzọ (n'ezie enwere ọtụtụ n'ime anyị, ana m etinye onwe m) afọ ole na ole ka e mesịrị, anyị achọpụtala ọ bụghị naanị mkpa akwụkwọ a n'akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ kamakwa na olee otú o si dị iche na nke ọtụtụ.
"Hopscotch", bipụtara na 1963, bụ isi nkọwa gbasara akwụkwọ ndị Hispaniki America. Ya usoro usoro na-enye ohere ịgụ dị iche iche, ya mere, ịkọwa okwu dị iche iche. Site na usoro ọgụgụ a, ihe Julio Cortázar bu n'uche na-anọchi anya ọgba aghara, ohere nke ndụ na enweghi mgbagha mmekọrịta dị n’etiti ihe ekere eke na aka onye omenkà mere ya.
Ọ bụrụ n’abụbeghị "Hopscotch" ma ị na-eche ime ya, kwụsị ebe a, aga n'ihu na-agụ ... Ọ bụrụ na ị naghị ezube ịgụ ya, kwụsịkwa, m na-agba gị ume ịme ya ... Ozugbo ị gụsịrị ya, laghachi ma gụọ ihe ọ bụla ị chọrọ ... Ma ezigbo akụkọ ahụ bụ Julio Cortázar dere.
1 Nyochaa «Hopscotch»
1.1 Akwụkwọ mbụ
1.1.1 "N'akụkụ ebe ahụ"
1.1.2 "N'akụkụ ebe a"
1.2 Akwụkwọ nke abụọ
1.2.1 Site n'akụkụ ndị ọzọ
1.3 Isi nke m kacha amasị m: Isi nke 7: The Kiss
2 Ajuju ajuju banyere akwukwo "Hopscotch"
2.1 Ọnye na-bụ protagonist nke Hopscotch?
2.2 Nye bụ dibịa anwansi?
2.3 Kedụ aha nwa dibịa afa?
2.4 Kedu ụdị okike bụ Cortázar?
Tupu anyị ekwuo na ọ bụ ọrụ dị iche na ndị ọzọ n'ihi na nke a na-egosi òkè onye na-agụ ya. A na-atụgharị akwụkwọ abụọ nke akwụkwọ a na ndị isi oche (dị ka aha ya na-egosi, ụdị egwuregwu hopscotch nke anyị niile na-egwuri egwu n'oge ụfọdụ). Typedị ụdị a mebiri ihe niile guzobere rue akwụkwọ.
Akwụkwọ mbụ nke "Hopscotch" anyị ga-agụ ya na a usoro ihe n'usoro, mechie n'isi 56. Emebere ya Akụkụ abụọ: "N'akụkụ ebe ahụ" y "N'akụkụ ebe a". N'ime ha abuo, edeputara nkenke ma obu akuko nke akwukwo a.
"N'akụkụ ebe ahụ"
Horacio Oliveira na-arụ ọrụ dị ka onye ntụgharị na Paris. N'ebe ahụ ka ya na ụfọdụ ndị enyi ya hiwere klọb, ebe ọ na-egbu oge ikwu ma ọ bụ ịge egwu egwu jazz. Ọ na-enwe mmekọrịta ịhụnanya na Lucía, la Maga, onye Uruguayan bụ nne nke nwatakịrị ọ kpọrọ Rocamadour. Agbanyeghị, mmekọrịta pụrụ iche dị n’etiti ha abụọ na-emebi. N'otu n'ime nzukọ ha, Rocamadour dara na mberede na, n'ihi ya, Lucía na-apụ n'anya ma hapụ ahịrị ole na ole edere.
"N'akụkụ ebe ahụ"N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, akụkụ mbụ a na-ejedebe na ihe oyiyi nke hopscotch, eri nkịtị na akwụkwọ niile na-anọchite anya ọchụchọ maka nguzozi (igwe).
"N'akụkụ ebe a"
Omume nke akụkụ a nke akwụkwọ a na-eme n'obodo Buenos Aires. Tupu Oliveira erute ebe a, ọ chọsiiri La Maga ike na Montevideo. Jiri ụgbọ mmiri laghachi Argentina, ọ na-emehie ya maka nwanyị ọzọ.
Na Argentina, ọ laghachiri ọbụbụenyi ya na Onye Njem ma zute nwunye ya, Talita, bụ onye na-echetara ya La Maga site n'oge mbụ. Ọ ga-esoro di na nwunye a rụọ ọrụ na circus na ụlọ ọgwụ psychiatric. Mana Oliveira na-enwe nsogbu site na mgbaàmà na-aga n'ihu nke enweghị echiche. Ihe mgbagwoju anya ya na-eme ka o chee na ọ na-ahụ La Maga mgbe niile kama Talita. Nke a ga - ebute ọgba aghara nke na - eme ka ị chee echiche banyere igbu onwe gị. Ọ na-agba mbọ igbu onwe ya mana n'ikpeazụ Onye njem na Talita gbochiri ya ịda site na ire ere gaa na patio ebe a na-ese hopscotch.
N'akwụkwọ nke abụọ anyị nwere Nke abụọ ịgụ ọzọ y malite n'isi 73. Na isi, anyị ga-ahụ ihe mgbakwunye ọhụrụ na odida obodo ahụ, "Akwụ ụgwọ akụkụ", na usoro nhazi nke edepụtara na mbụ n'akwụkwọ ahụ.
Site n'akụkụ ndị ọzọ
Okirikiri ala ndị a mejupụtara ọhụụ dị omimi nke otu eziokwu ahụ, bụ nke e gosipụtara njikọ zoro ezo. Mana na mgbakwunye, mkpụrụedemede ndị dị ka Morelli pụtara, onye edemede ochie nke onye edemede dere iji kpughee ụfọdụ igodo Hopscotch: emeghe, nkewa, nke na-akpasu iwe na nke na-ekere òkè nke ahụ na-egosipụta ọgba aghara nke eziokwu mana ọ nweghị iwu ma ọ bụ na-akọwa ya.
Isi nke m kacha amasị m: Isi nke 7: The Kiss
Ana m emetụ ọnụ gị aka, na mkpịsị aka m na-emetụ ọnụ ọnụ gị aka, m na-adọta ya dị ka a ga - asị na ọ na - esi n'aka m apụta, dị ka a ga - asị na oge mbụ ọnụ gị na - emepe obere, naanị m kwesịrị imechi anya m imeghe ihe niile wee bido, m na-eme ọnụ m chọrọ, ọnụ nke aka m na-ahọrọ ma na-adọta gị, ọnụ a họọrọ n’etiti mmadụ niile, jiri nnwere onwe eze wee họrọ m iji ya jiri aka m kpụọ ihu gị, na na site na ohere m na-achọghị ịghọta dabara na ọnụ gị nke na-amụmụ ọnụ ọchị n’okpuru nke aka m dọtara gị.
Look lere m anya, ị lere m anya, ị na-elekwu m anya karịa mgbe ahụ anyị na-akpọ cyclops, anyị na-elekwu anya ma anya anyị na-ebuwanye ibu, ha na-abịarukwu ibe ha nso, ha na-agabiga na cyclops na-ele ibe ha anya. , na-eku ume mgbagwoju anya, ọnụ ha na-ezute ma na-alụ ọgụ ọkụ, na-atarịta ibe ha arụ na egbugbere ọnụ ha, na-ejighị ire ha ezé, na-egwuri egwu na ogige ha ebe ikuku dị elu na-abịa ma jiri senti ochie na-agbachi nkịtị. Mgbe ahụ aka m na-achọ ịbanye n'ime ntutu gị, jiri nwayọ na-emetụ omimi nke ntutu gị aka mgbe anyị na-esusu ọnụ dị ka à ga-asị na anyị nwere ọnụ jupụtara na okooko osisi ma ọ bụ azụ, na-emegharị ahụ dị ndụ, na-esi isi na-esi isi. Ma ọ bụrụ na anyị ataa onwe anyị ụfụ, ihe mgbu ahụ na-atọ ụtọ, ma ọ bụrụ na anyị atụọ mmiri na nkenke oge dị mkpirikpi ma dị egwu, ọnwụ ahụ mara mma. Ma enwere naanị otu mmiri na naanị otu uto nke mkpụrụ osisi chara acha, echekwara m na ị na-ama jijiji megide m dị ka ọnwa na mmiri.
Ajuju ajuju banyere akwukwo "Hopscotch"
Ọnye na-bụ protagonist nke Hopscotch?
Onye na-akwado akụkọ a bụ Horacio Oliveira. Ọ bụ nwoke Argentine dị ihe dị ka afọ 40-45. Ọ bụ nwoke maara ọtụtụ ihe na ọ gara Paris ịmụ ihe mana ọ naghị agụ akwụkwọ. Kama, ọ na-enyere aka ịhazi ozi.
A maara na o nwere nwanne nwoke bi na Argentina. Na na ọ bụ ụdị mmadụ yiri ka ọ na-achọ ihe mgbe niile (oge ụfọdụ na-enwe mmetụta na o nweela ihe ọ na-achọ ...).
Nye bụ dibịa anwansi?
Onye anwansi bu Lucia, onye ozo bu akuko a. O bikwa na Paris, mana obodo nna ya bu Uruguay. O nwere nwa nwoke nwere aha ozo: Rocamadour. N'adịghị ka Horacio, ọ bụ nwa agbọghọ nke na-amaghị ihe ọ bụla gbasara ihe ọ bụla, nke a na-eme ka ọ na-adị ya ka oge a na-eleda ya anya ma ọ bụ na ọ bụ obere ihe n'akụkụ ndị ọzọ.
Isi okwu ya bụ na o nwere ọtụtụ nro na obi ọjọọ, ihe na-ahụ n'anya n'anya na nke ọzọ na-enwe anyaụfụ site na akwụkwọ akụkọ ahụ. Horacio na-enwere anwansi ahụ ike ya iji nwaa ibi ọhụụ ọhụụ, ka mmiri gwụ ya mgbe ọ na-egwuri egwu ma nwee obi ike.
Kedụ aha nwa dibịa afa?
Dị ka anyị kwuru na mbụ, akpọrọ nwa ya nwoke Rocamadour mana ezigbo aha ya bụ Francisco. Ọ bụ nwa dị otu ọnwa nke Madame Irene, onye na-achị achị na-elekọta na mbụ. Na njedebe, nwata ahụ bi na La Maga na Horacio, ihe omume na-akpali akpali na-esokwa ya. Eziokwu a bụ akụkụ bụ isi nke akwụkwọ ọgụgụ.
Kedu ụdị okike bụ Cortázar?
Ajụjụ a na - akpata “esemokwu” n’etiti ndị na-akatọ edemede akwụkwọ, ebe ọ bụ na o siri ike ịkọwa ọrụ ya. Odela akwukwo, ma obu abu; Otú ọ dị, Julio Cortázar pụtara maka Magic Realism ya. Gendị a bụ nke onwe, ọhụụ, na mgbe niile "na-agba egwu" n'etiti ezigbo na kediegwu. N'agbanyeghị nke a, enwere ndị ka na-esi ọnwụ itinye ya na Ọganihu Latin America a ma ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nkowa di omimi nke «Hopscotch» nke Julio Cortázar
Ezigbo ọhụụ nke hopscotch, dị ezigbo mma, m ga-enye gị otu ozi ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ya, isi 62 nke hopscotch na-aga n'ihu na akwụkwọ, m na-ekwu, ọ bụ mmalite nke akwụkwọ a na-akpọ 62 / model to zukọta, ebe a na Buenos Aires Anyị na-asị rayuelita, enwere m olile anya na ozi a ga-enyere gị aka, ebe hopscotch nwere ike maka nwa oge
Ọ dị m ka ọ dị mma nke ukwuu n'ihi na ọ masịrị m ịgụ ọtụtụ ihe na nke a bụ maka ọrụ ụlọ ma ugbu a ọ bụrụ na m nwere ike ịkọwapụta nke ọma n'ihi na agụrụ m akwụkwọ ahụ dum daalụ nke ukwuu.
Ọ ga-amasị m ịmata ebe a na-ekwu na Holiveira akwụkwọ akụkọ (counter) ka ọ bụrụ onye ntụgharị.
Afọ 34 ka ọ ghachara mkpụrụ, onye na-ede uri m zutere na Venezuela, ebe ọ bụ nwa ewu, dị ka m kwuru, edere m ihe hopscotch.
Hopscotch ma ọ bụ Tread.
(AB SON NKE Ndụ)
Nwata nwoke n'aka
A mbụ nzọụkwụ ulo oru ugbua
Ahụ ya na-ehulata, nkwekọrịta zuru oke
Ọnụ ọgụgụ ahụ na-akpali
Nwa nwoke ahụ tiri mkpu, ọ bụ nke m!
Ndụ bụ ihe akaebe, ugboro ugboro
Ga-enwe ụwa gị nke ìhè.
Agara m, arịgoro m, nọmba anwansi m
Mee ka ụwa anyị dị n’otu
Nwatakịrị n’uche m bụ
Agụụ nwata, hapụrụ aka ya dị ọcha.
Malite ndụ gị, hopscotch ị bụ
Na njedebe, zuo ike, zuo ike
Na-aicingụrị ọicingụ, na-aga ụlọ akwụkwọ
Nna ukwu nke ihe nzuzo anyị
Ekpu alifafes, ha abis na-ala
Hopscotch na-arị elu
Ugboro gị na njedebe na-aga
Carlos Garcia. 2016 (+1) / 31/10. Daybọchị netizen nke mba ụwa.
Zaghachi carlos garcía garcía
Onye nkuzi dijo
enweghi ihe omuma a ghaputara, echiche ndi edeputara abughi ihe doro anya ma di nkenke, otutu ihe edeturu ihe na-efu maka nghota di nma nke akwukwo.
Zaghachi na PROFE
Onyinyechi ukwaonye (@onyechukwunyere) dijo
M hụrụ CortÁZAR
NA MY BLOG M NA-EGO ND AU ỌZỌ NA ND AU ỌCHORTA NA-EKWU ND IF ỌZỌ NA-EKWU Ọ B IFR AT na oge ọ bụla ha na-eme ka bọlbụ na-apụta na edemede ha.
ỌZỌ na-eguzobe ihe kpatara ya (nke m na-egosi na onwe m) iji gụchaa ọrụ niile ma ọ bụrụ na ọ dabara
N’OGE M H SER THE MHAN OF NKE BIKỌ B AS ỌNW ANYA NKE ỌM AUR AU ỌZỌ.
CORTÁZAR NWERE HA NA GOFỌD V ỌMA
Ekele dịrị gị nke ukwuu maka ozi gị na ozi ọma maka BLOG
M NA-EBERE PHOTO NKE AKW BKWỌ ahụ
M ga-akụda ya, m ga-echekwa gị
Ọ B BEGH M M NA-ACH EVTA Ọ B IF Ọ B IF Ọ B I Ọ B I NA M GA-EME IHE ỌZỌ INWETA NA RAYUELA N’ỌR THE MA Ọ B OR N’ỌZỌ INWETA
Ọ BR SOM na mmadụ elee ...
Zaghachi Anton Vea Campos (@Antonbvici)
Ihe eji mara Cortazar bu Fantastic Literature, obughi site na Ime Anwansi Realism !!
ọhụụ magburu onwe ya nke hopscotch, ọ dị m mma na ọ bụ ọrụ dị iche na ndị ọzọ n'ihi na ọ gụnyere itinye aka nke onye na-agụ ya.
Zaghachi Sebastian Castro
Nke bụ eziokwu bụ na mgbe m gụrụ Hopscotch ọ dịka nnukwu akwụkwọ. Gave nyere m ntụgharị uche n'echiche ahụ, ruo n'ókè m ga-agụghachi ya na-enwe olileanya ịchọta ọgba aghara ahụ na ọkwa ahụ ha na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ya.
Ezigbo mma saịtị !!! Mmasị maka akwụkwọ na-enwe mmetụta nke ndị nweworo ibe nduzi ndị a. Feel na-enwe mmesapụ aka ...
Kedu ka ị ga-esi amataghị Hopscotch, na otu esi amataghị Cortazar dịka otu n'ime ogidi nke akụkọ Spanish na-ede. Nanị otu titan nke ubi. Ezigbo isiokwu.
Frankenstein. Oge ochie Mary Shelley gbanwere 200
Akwụkwọ kacha mma nke 2017 ị gaghị enwe ike ịkwụsị ịgụ